Johane Chitsauko 09. Kutongwa – mapofu achaona, vanoona vachapofomara
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Johane Chitsauko 09. Kutongwa – mapofu achaona, vanoona vachapofomara
Johane Chitsauko 09. Kutongwa – mapofu achaona, vanoona vachapofomara
Johane 9:1 Jesu wakati achipfuvura, akavona munhu wakanga ari bofu kubva pakuberekwa kwake.
Bofu harina kuwana Jesu. Jesu ndiye akawana bofu.
Ruponeso rwedu runobva pana Jesu achiuya kuzotinunura.
Jesu, chiedza chenyika, akasangana nebofu risina chiedza charaiona.
Nekumupa chipo chekuona, Jesu akaratidzira kuti anokwanisa kuzarura maonero emweya pamunhu akapofomara pamweya oshandura munhu iyeye kumuita mutendi.
Johane 9:2 Vadzidzi vake vakamubvunza, vachiti: Rabi, ndianiko wakatadza, uyu kana vabereki vake, zvaakaberekwa riri bofu?
Zvipingaidzo nematambudziko zvirimo muhupenyu hwedu.
Johane 9:3 Jesu akapindura, akati: Uyu haana kutadza, kunyange navabereki vake; asi izvi zvakaitwa kuti mabasa aMwari avoneswe maari.
Kuremara nematambudziko hachisi chiratidzo chehupenyu huzere zvivi kazhinji kacho. Matambudziko makuru muhupenyu hwedu hazvirevi kuti takatadza. Zvinokwanisa kuva zvingori zvipingaidzo zvekuti Mwari akurire, kuti aratidze simba rake.
Johane 9:4 Ndinofanira kubatebasa rowakandituma, achiri masikati; vusiku bwunovuya, bwusingagoni munhu kubate basa nabwo.
Kuti zvishande kuna Mwari, munhu iyeye anofanira kuva akatumwa naMwari, kwete nemunhu.
Asi kazhinji vanhu vanodiwa naMwari kuti avashandise vanoguma vakutumwa nemakereke avo. Kereke yovatonga, pachinzvimbo chaMwari. Kunofanira kuva neruwadzano rwemunhu mumwe nemumwe naMwari neShoko rake rakaziviswa rwakasimba kwazvo kudarika “kuyanana nekufunga kweboka” nekurudziro yekereke.
Jesu aive panyika achivinga chinangwa chakasarudzika, chaisanganisira kuita zvakanaka nekuita zvishamiso. Aive nebasa raaifanira kupedza, uye aifanira kuzadzisa Magwaro aitaura nezvake. Aikoshesa zvinorehwa neMagwaro, uye aisafadzwa nemapoka ezvechitendero emazuva ake aive akazadzwa nerudo rwekutevera mirairo yevanhu.
Mweya waMwari waigara maari nekumutungamirira muShoko rake achibata basa.
Jesu aivepo kuzadzisa hushumiri hwake hwepanyika asati afa paPaseka yakatevera.
Hupenyu hwedu hunofanira kusundwa nekuziva kuti nguva yeKutambudzika kukuru iri kuuya. Nguva iyi isati yasvika Jesu anofanira kusiya chigaro chenyasha achiuya kuzotora Mwenga wake kunosangana naye kumakore.
NaJesu asisipo pachigaro cheNyasha, mweya yevaHedeni haizowani kupona munguva yeKutambudzika.
Mweya Mutsvene chete ndiwo unotidzidzisa kuvimba.
Asi vashoma kwazvo vachada kunzwisisa Shoko rakaziviswa.
RUKA 18:8 ... Ndinoti kwamuri: Uchakurumidza kuvaruramisira. Asi kunyange zvakadaro mwanakomana womunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here?
Saka vanhu vanorarama vashoma kwazvo vachatorwa kukwira kuDenga seMwenga waKristu.
Mweya Mutsvene paunotora Mwenga kuenda naye kunosangana naShe kumakore, hupenyu hunobva hwasiya nyika.
VAROMA 8:10 ... asi mweya mupenyu nokuda kwokururama
Hupenyu husisipo, rufu runopinda panyika panguva yeKutambudzika. Pasina Mweya Mutsvene vanoenda kumasvondo vachasara vari murima guru.
Tiri kurarama munguva yemadekwana. Mumashure medu vusiku hunouya hwenguva yeKutambudzika. Hakuna kupona kuchawanikwa kuvaHedeni vasina kuponeswa. Hakuna makereke anozogona kuponesa vanhu vawo kubva kunguva yeKutambudzika.
Johane 9:5 Kana ndichiri panyika, ndiri chiedza chenyika.
Paairarama akatisiira muenzaniso wekuti titevere.
Pasi rese rinokwanisa kudzidza kubva kwaari nekumutevedzera. Hushumiri hwake hunojekesa nzira yatinofanira kutevera.
Simba raJesu rekupa chiedza nekuona kumeso akapofomara rakamugadza setsime rechiedza chemweya. Kana akagona kupa kuona kumunhu aive ari bofu, anokwanisawo kutipa kuona kwemweya kune vamwe vedu vakapofomara pamweya.
“Eva akadya apura” “Jesu akaberekwa musi wa25 Zvita”, “Pasita ndiye musoro wekereke”, “Mutumwa wechinomwe ndiye izwi raMwari”, “Mwari ari pamitumbi mitatu”, Zita raMwari ndiBaba, Mwanakomana, naMweya Mutsvene” -- zvese izvi kutaura kusimo muMagwaro kusina chiedza. Kana tikatenda makuri tinenge tiri mapofu kune zvimwe zvikamu zveBhaibheri.
Nei tichitenda kutaura kwakadaro? Nekuti zvakadzidziswa kwatiri nevatungamiri vemakereke edu. Saka musoro wekereke, muFarise wanhasi, ari kutiita kuti tigare tiri mapofu.
Dzidziso dzemakereke nhasi dzingori mifungo yevanhu, iri kuparidzwa sechokwadi.
Vatungamiri vemakereke vanodzidzisa vanhu zvinhu zvakasarudzwa kwazvo kusvikira vatanga kuona zvinhu nenzira iyoyo. Kwapera chinguva vanhu vanenge vari mukereke vanosiya kutsigira zvavanotenda neMagwaro, nekuti vatungamiri vemakereke havagoni kuzviita. Vanhu nenungo vanobva vagamuchira zvinotaurwa nevatungamiri vemakereke vobva vava vaendi vekukereke kwete vatendi veBhaibheri.
Nekuti vakasungirirwa pazvitendero zvavo, vanoenda kumakereke vanoshaiwa hanya dzekutsvaga chokwadi votadza kuzvisunungura.
Danieri 11:26 Vanodya zvokudya zvake, ndivo vachamuparadza; hondo yake ichapararira,
Nyama mucherechedzo wedzidziso. Kuterera vaparidzi vanotenda kune zvimwe zvidimbu zveBhaibheri, pachinzvimbo cheBhaibheri rese, ndicho chikonzero chekuwira kwedu pasi. Ngwarirai vaparidzi vanotaura kuti pane mamwe Magwaro asina basa, kana kuti akangonyorwawo zvawo, kana kuti vhesi riri muKing James Vhezheni rakaturikirwa zvisizvo. Mudzidzisi wenhema anotaurawo kuti mune zvakakanganiswa muBhaibheri, kana kuti mune zvidimbu zveBhaibheri zvatisingafaniri kunzwisisa. Kana tikavaterera tinenge tanyengerwa.
Dzidziso inounza kutonga. Kuraira kunoreva kuti tinenge taita zvakaipa, nekururamisa zvinhu zvatinotenda mazviri. Nokuranga mune zvakarurama.
Rugwaro rwese rune zvarunoreva zvakadzama kunyange kana takapofomadzwa kwazvo kuti tisaone zvinhu izovzvo. Saka tinofanira kuramba tichishingirira kutsvaga kuti tione zvinhu zvakakosha zvakadzama zveMagwaro.
Ruka 8:18 Naizvozvo, chenjerai mutovo wamunonzwa nawo; nokuti unazvo, uchapiwa; usina, uchatorerwa naichecho chaanoita sounacho.
Kana muchitenda Shoko rakaziviswa ramakanzwa, munozopihwa zaruriro zhinji dzakadzama dzezvakavanzika zveBhaibheri. Pamunopokana neGwaro, munoona chiedza chishoma motanga kurasikirwa neruzivo rweBhaibheri rwamaimbova narwo.
Johane 9:6 Wakati areva izvozvo, akapfira mate pasi, akakanya dope namate, akazodza dope rawo pameso ake,
Vatungamiri vezvitendero vanosimudzirwa.
Asi Jesu paakada kuponesa munhu aive bofu akashandisa guruva ivhu renyika kuzviita. Guruva ndicho chinhu chepasi -pasi chamungawana.
Saka Jesu ari kutidzidzisa chinhu chakakosha chekuti tive vasina kukosha. Adamu nezvese zvaaive pamuviri wake zvakaitwa neguruva renyika. Kuva bofu kwaireva kuti zvimwe zvikamu zvezvinhu zvinoshandiswa kuita maziso ake zvaive zvisipo. Makemikari aive asipo iwayo achawanikwa muguruva.
Mate anobva mumuromo maMwari. Mucherechedzo weShoko raMwari rinobva mumuromo maMwari. Mate akasanganiswa neguruva rakaninipiswa zvakapa zvinhu zviya zvaive zvisipo pamakemikari ekuzadzisa maziso ake kuti aone.
Johane 9:7 akati kwaari: Enda undoshamba mudziva reSiroami, (ndokuti, kana zvichishandurwa, Kutumwa), Ipapo akaenda, akandoshamba, akadzoka achivona.
Ichi ichokwadi chakadzama. Panzvimbo paive nemunhu aive bofu, aive asingagoni kuona. Paakabva panzvimbo iyoyo, akazogona kuona.
Vatungamiri vemakereke edu vakatiita mapofu paMagwaro nedzidziso dzavo dzakaitwa nevanhu nemazano avo. Saka Jesu akamira kunze kwekereke munguva yekereke yekupedzisira yeRaodikia. Kunze kwekereke chete ndiko kwatinogona kumuona seShoko rakaziviswa.
Mukati mekereke takaitwa mumifananidzo yemapasita edu apo tinobatira mweya wapasita wedu.
Dziva reSiroami raive nemvura.
Kusukwa nekushambidza kwemvura paShoko – zvinotigonesa kuona nekunzwisisa Bhaibheri.
Tinokwanisa chete kuzadzisa chinangwa chaMwari kana akatituma kunomushandira. Vanhu havagoni kutituma. Kereke haigoni kutituma. Mwari ega ndiye anokwanisa kutituma kana tichifanira kuzadzisa kuda mwaMwari.
VAEFESO 5:25 Imi varume, idai vakadzi venyu, Kristu sezvaakadavo kereke, akazvipa nokuda kwayo;
26 kuti aiite tsvene achiinatsa nokushambidza kwemvura pashoko,
Tinozvisuka pamweya nekutenda nekurarama neMagwaro patinodzokorora zvakanyorwa muMagwaro ndipo patinotaura kuti takatumwa naIshe Jesu.
Johane 9:8 Vakanga vagere naye, navaimuvona kare, kuti ndiye waikumbira, vakati: Ko uyu haazi iye waigara achikumbira here?
Vanhu havana kutenda shanduko yavaive vaona paari. Bofu raive roona. Wow! Ishanduko hurusa.
Izvi mucherechedzo wekuzvarwa patsva mumaonero emweya anogona kuona kuti Bhaibheri riri kurevei. Vanhu vakaona musiyano mukuru apo mutadzi akashandurwa kuva mutsvene. Vaisatenda vakaramba Magwaro ndivo vanozoita vatendi vanogona kuona Chiedza chemavhesi eBhaibheri.
Johane 9:9 Vamwe vakati: Ndiye; vamwe vakati: Kwete, asi wakatodzana naye. Iye akati: Ndini
Satani agara ane kurasisa kwake kwakachenjera. Kwete uyu haasiye munhu uya. Anenge mumwewo munhu akafanana naye. Asi munhu uya akabva ati, “ndini munhu aive bofu”.
Munhu aive aponeswa aive nekupupura kwakasiyana kwazvo. Haana kuzvikwanisa mumifungo yevanhu vaive vasarudza kukakavara.
Kutukwa kukuru kwanhasi kuri muchiKristu chemakwikwi.
Zvishamiso zvikuru zvinoitika, asi kana vasiri mukereke mangu ndinovafuratira ndovimba kuti vachaenda havo. Pamashure pazvo zvese, munhu mumwe nemumwe anoenda kukereke anofunga kuti kereke yaanoenda iye chete ndiyo ine chokwadi. Masangano ese anodarika 45 000 akasiyana-siyana neasiri emasangano vanofanira kunge vachitadza. Nei? Nekuti kereke yangu ini chete ndiyo ine chokwadi. Nekufunga kwakadai tinenge tichizvinyengera.
Johane 9:10 Zvino vakati kwaari: Meso ako akasvinudzwa seiko?
Vavakidzane vake maJuda vakashamiswa. Chimwe chinhu chaive chaitika chaive pamusoro kwazvo pesimba ravo. Vaive vakurirwa.
Zvino vakaedza kutongesa munhu aive aponeswa kuti vawane chakaipa. Zvimwe zvikonzero kuti varambe zvaive zvaitika.
Johane 9:11 Akapindura, akati: Munhu unonzi Jesu wakakanya dope, akazodza meso angu, akati kwandiri: Enda kudziva reSiroami, undoshamba; naizvozvo ndikaenda, ndikashamba, ndikavona.
Saka vavakidzani maJuda vakada kuziva kuti Jesu aivepi.
Havana kugamuchira chishamiso ichi. Chishamiso chaive dambudziko guru kwavari. Havana kuda kutenda muchishamiso ichi.
Vakafunga kuti dutu remibvunzo richaita kuti dambudziko iri rinyangarike.
Johane 9:12 Vakati kwaari: Iye uripiko? Akati: Handizivi
Asi munhu akavadaira kuti aisaziva sezvo Jesu aive aenda.
Zvino kusatenda kwavo kwakawedzera.
Nekuti havana kutenda munaJesu, vakadaidza vatungamiri vezvitendero. Vaive vava pakanaka nekuti vatungamiri vezvitendero havanawo kutenda munaJesu.
Johane 9:13 Vakamuisa kuvaFarise, iye wakanga ari bofu kare.
Vakauya nevatungamiri vezvitendero nekuda kwechikonzero chimwechete – kuti varambe zvaive zvaitwa naJesu. Nhasi uno vatungamiri vemakereke vanouya kuzoramba zvinotaurwa neMagwaro.
Bvunzai munhu anoenda kukereke kuti nei Eva akarangwa naMwari nemurango wekutakura mimba sezvo aive abata mimba, vanomhanyira kuvatungamiri vavo vemakereke netarisiro yekuti vaizogona kuvatsanangurira. Nenzira iyoyo vanobva varamba zvakazara zvakanyorwa muMagwaro.
Vabvunzei kuti nei Mwari, semurango, akasarudza kuti awedzere kubata mimba kwaEva pakubata mimba kwaaive aita izvi zvikavashamisa. Mwari aive avaudza pakutanga kuti vaende vazadze nyika.
Asi apa Mwari aida kuwedzera kubata mimba kwaEva. Kudarika zvaaida kuti zviitike pakutanga. Nei?
28 Mwari akavaropafadza, Mwari akati kwavari: Berekai, muwande, muzadze nyika, mubate ushe pairi; muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamu­soro peshiri dzedenga, napamusoro pe­zvipenyu zvose zvinokambaira panyika.
Apa kuwedzerwa ndiko kwaive chikamu chemurango wake pamwechete nekuomerwa pakuzvara mwana. Asi izvi zvaive zvisiri chikamu chemurango waAdamu.
Nei Mwari akasarudza kuranga Eva nenzira yaaisakwanisa kugovana naAdamu?
Mubvunzo unokura apo vatungamiri vemakereke vanonyenyeredza nyaya yechivi chekutanga, vachiita kuti vanhu vavo vanovatevera vagare vakadzikatirwa nekusaziva kwevatungamiri vavo .
Saka vatungamiri vemakereke vanoramba zaruriro yeMagwaro yakaunzwa nemutumwa kukereke yechinomwe, saka vanoramba dzidziso dzake vosiya nhengo dzekereke yavo murima. Saka vanoenda kumakereke vanoramba vari mapofu vasingagoni kuona chivi chekutanga.
Chokwadi chakaziviswa nhasi uno. Asi vatungamiri vemakereke vari kuramba zaruriro yezvakavanzika zveBhaibheri Shoko raMwari. Vachiramba Shoko rakaziviswa.
Vabvunzei kuti nei Mwari akagamuchira ropa remhuka rakadeurwa kuripira zvivi munongowana kutarisa kwevanhu akapererwa.
Zvino Jesu anomisidzana netsika dzakaitwa nevanhu vatungamiri vezvitendero.
Kuita misangano yezvitendero nekuparidza musi weMugovera paSabata, raive basa rakaomera vatungamiri vezvitendero. Asi Murairo waMosesi waiti vaisafanira kushanda musi weSabata. Saka vakafuratira chinhu chekuti vatungamiri vechiJuda vakaputsa murairo weSabata.
Kuterera zvaive muTestamente yekare kwaive chikamu chemurairo wechiJuda.
Isaya 42:18 Inzwai, imi matsi; tarirai, imi mapofu, muone.
Kuita kuti mapofu aone kwaifanira kuitwa kuitira kuzadzisa Rugwaro urwu. Asi hapana pakati pevaFarise aikwanisa kuzviita nekuti zvaive zvisingagonekwi nesimba revanhu. Mwari ega ndiye aikwanisa kuzadzisa Rugwaro urwu.
Johane 9:14 Zvino raiva sabata zuva iro Jesu raakakanya dope naro, akasvinudza meso ake.
Zvinoshamisa nekutyisa-- Jesu aive azvipira kuponesa bofu musi weSabata.
Pachinzvimbo chekuti vaone kuti Mwari aive aita chishamiso, vakasarudza kutora chishamiso ichocho sebasa. Saka chakaputsa Murairo weSabata. Uku kwaive kutaura kwevanyengeri, nekuti vaFarise vaishanda nesimba pavaitungamirira ungano paSabata musinagoge.
Zvino pakabva pasvika nyaya yekubatsira panguva yenjodzi.
Ruka 14:5 Wakapindura akati kwavari: Ndianiko pakati penyu, ungati, kana ane mbongoro yake kana nzombe yake ikawira mugomba, nomusi wesabata akasayibudisa pakarepo.
6 Vakasagona kupindura zve pamusoro paizvozvi.
Kana tichifara kubatsira chipfuwo kubva munjodzi yachiwira, chii chakaipa pakubatsira munhu asingaone kubva pahubofu hwake?
Johane 9:15 Zvino vaFarise vakamubvunza zve, kuti wakavoneswa sei. Akati kwavari: Waisa dope pameso angu, ndikandoshamba, ndikavona.
VaFarise vaifara. Vaive vawana chikonzero chekuti vapomere nacho Jesu. Uyu waive mweya “wechichechi-chechi” pakuipa kwawo. Chishamiso hachina kuitika mukereke, saka pane chinhu chisina kuita zvakanaka.
Jesu, munhu aive asingazvininipisi kuvaFarise aive aita chinhu chaive chisina muFarise aikwanisa kuchiita. Kuzvikudza kwavo kwaive kwaiswa vara. Vaifanira kutotsvaga chikonzero chekumupomera.
Johane 9:16 Zvino vamwe vavaFarise vakati: Munhu uyu haazi waMwari, nokuti haachengeti sabata. Asi vamwe vakati: Ko munhu mutadzi ungaita seiko zviratidzo zvakadai? Ipapo kupesana kwakamuka pakati pavo.
VaFarise vakati Jesu aisakwanisa kuva ari waMwari nekuti, vaiti, aive asingatenderwi kuponesa musi weSabata. Asi vaifunga chaivo vaikwaisa kuona kuti chishamiso ichi chaive chisingagoni kuitwa nemutadzi. Chishamiso chaisagona kuitwa nevaFarise. Munhu mumwechete aikwanisa kusvinudza meso aive asingawoni ndiMwari.
Johane 9:17 Zvino vakati zve kubofu; Iwe unoti kudiniko pamusoro pake, zvaakasvinudza meso ako? Akati: Muporofita.
Munhu aive bofu akataura kuti Jesu aive muprofita. Asi Magwaro anoti Mwari aizozarura meso evasingavoni.
Isaya 35:4 Iti kuna vane moyo inotya, "Simbai, musatya! Tarirai, Mwari wenyu achauya nokutsiva, nokuripira kwaMwari; achauya achikuponesai."
5 Ipapo meso amapofu achasvinudzwa, nenzeve dzematsi dzichadziurwa.
6 Ipapo anokamhina achakwakuka senondo, rurimi rwembeveve rwuchaimba nokuti mvura zhinji ichadzutuka murenje, nehova dzemvura musango.
Jesu aive aita zvishamiso zvakadaro. Matsi dzakanzwa, vakaremara vakafamba, mbeveve dzikataura.
Mujaya aive aponeswa zviri pachena kuti akatanga kuremekedza Jesu zvakanyanya, sezvo Jesu aive aita chinhu chaigona kuitwa naMwari chete.
Asi maJuda aive atsamwa. Neimwe nzira vakatsanangura vachimhura chishamiso ichi chese.
Mujaya, nekusangana naJesu, akafadzwa kwazvo naJesu akashaiwa mufaro muvaFarise vaive vari vatungamiri vemusinagoge make.
Johane 9:18 Naizvozvo vaJuda havana kutenda pamusoro pake, kuti wanga ari bofu, akazovona, kusvikira vadana vabereki vowakavoneswa.
VaFarise nevaive vavakidzani vake vakaedza kwazvo kuti vaburitse kuti aive asina kuzvarwa ari bofu. Nenzira iyoyo vaikwanisa kuramba kuti chishamiso chaive chaitika.
Vavakidzani vaiziva kuti vaifanira kutenderana nevaFarise kana kuti vaizotadza kugamuchirwa musinagoge.
Vanoenda kumakereke vane dambudziko rimwechete iri nhasi. Vanoda kwazvo kutenda zvese zvinotaurwa nemapasita avo kuti vagamuchirwe mumakereke avo vochengetedza mbiri yavo.
Asi kugamuchira Jesu saMwari kwaive kukuru kwazvo kudarika zvaive zvakagadzirirwa kuitwa nevaFarise.
Saka vakadaidza vabereko vemujaya aive aponeswa ivo vakataura kuti, “Nei mabvunza isu? Bvunzai mwanakomana wedu”.
Johane 9:19 Vakavabvunza, vachiti: Uyu ndiye mwanakomana wenyu, wamunoti wakaberekwa riri bofu here? Zvino unogovona seiko?
Johane 9:20 Vabereki vake vakapindura, vakati: Tinoziva kuti uyu mwanakomana wedu, vuye kuti wakaberekwa riri bofu;
Johane 9:21 Asi hatizivi kuti zvino wovona sei; nowakasvinudza meso ake, hatimuzivi; mubvunzei henyu; waaruka, uchazvirevera hake.
Vabereki vaitya. Vaive vakangofanana nevanoenda kumakereke nhasi vanotya kwazvo kudzingwa mumakereke.
Johane 9:22 Vabereki vake vakareva izvozvo, nokuti vaitya vaJuda, nokuti vaJuda vakanga vatotenderana, kuti kana kuno munhu unotenda kuti ndiye Kristu, abudiswe musinagoge.
Vabereki, sembwende dzinoenda kumakereke, vakaramba kubvuma chishamiso chakaitwa kunze kwechitendero chavo. Vakaramba kumira naJesu vakagezera mubvunzo kumwana wavo.
Johane 9:23 Naizvozvo.akati: Waaruka hake, mubvunzei henyu.
Johane 9:24 Zvino vakamudana zve rwechipiri,iye munhu wakanga ari bofu, vakati kwaari: Rumbidza Mwari; isu tinoziva kuti munhu uyu mutadzi.
Tarirai kubvunza kwavo – tinoziva kuti Jesu mutadzi. Munofanira kutenderana nesu.
Uku ndiko kuita kwehudzvanyiriri kwaive nevatungamiri vemaJuda. Vaizviti vakanaka. Vamwe ngavarambe kana vachida havo.
Vaive vasingabvunzi mibvunzo kuti vawane chokwadi. Vaive vatosarudza kare kuramba Jesu apa vaive vakumanikidza munhu uyu kubvumirana navo.
Vatungamiri vemakereke vanoshanda nenzira imwechete. Ndangariro dzavo dzakazadzwa nezvinhu zvavanotenda nekubatira saka vanotsvaga chete kumanikidza vamwe kuti vabvumirane navo.
Johane 9:25 Ipapo iye akapindura, akati: Kana ari mutadzi ini handizivi; ndinoziva chinhu chimwe, kuti ndaiva bofu, zvino ndovona.
Munhu akaponeswa akadarikira mubvunzo wechivi waizotsanangurwa nevaFarise nenzira yaivaitira. Nehungwaro akasvitsa nhaurirano pachinzvimbo chaisakwanisa kurambwa. Aive ari bofu asi zvino aive oona.
Vatungamiri vezvitendero vaizosarudza kuti dai akaramba ari bofu sechindori muungano yavo. Zvino zvaaive oona aive akutanga kuzvifungira uye aitaura achirwira rutivi rwaJesu.
Johane 9:26 Ipapo vakati kwaari: Wakakuiteiko? Wakasvinudza meso ako sei?
Zvino vaFarise vakabva vabvunza kuti aive aponeswa sei. Vachiedza kutsvaga chikonzero chekuzvidza chishamiso ichi.
Johane 9:27 Akavapindura, akati: ndatokuvudzai, mukasanzwa. Munoda kunzwa zve nemhaka yeiko? Nemi munoda kuva vadzidzi vake vo kanhi?
Zvino munhu aive aponeswa akadavira nemhinduro yehuvhangeri. Munhu aive aponeswa akavaudza kuti ndakuudzai kare. Munoda kunzwa kupupura kwangu zvakare nekuti muri kufunga kuva vadzidzi vaJesu here?
Kusangana kwaakaita naJesu kwenguva duku kwakashandura mafungiro ake, kukamuita kuti ashaiwe kutya pakumisidzana nevatungamiri vechiJuda. Aive atova nekuita kwemuvhangeri apo aitarisira kuti kupupura kwake kunogona kukurudzira vamwe kutevera Jesu.
Johane 9:28 Vakamutuka, vachiti: Iwe ndiwe mudzidzi wake, asi isu tiri vadzidzi vaMosesi.
Zvino vaFarise vakamutuka. Mbiri yavo sevatungamiri vezvitendero yaive yava panjodzi. Saka vakadzokera kuMurairo waMosesi sesimba ravo.
Kutaura kuti “Muprofita Mosesi akati ....” raive simba repamusoro soro kwavari pane kuterera Jesu. Vakaramba munhu aitevera Jesu, pachinzvimbo vakatevera kukanganisa kwekuturikirwa zvaive zvakataurwa nemuprofita Mosesi.
Nhorondo inozvidzokorora nhasi uno.
Vaparidzi veMharidzo vanoisa zvakataurwa naWilliam Branham pamusoro peMagwaro.
Muprofita William Branham , akati..... “ kwavari zvakakosha kudarika Magwaro. Saka vanogadzirisa nekuturikira zvisiriizvo zvaakataura kuti vabude nemakereke akasiyana siyana eMharidzo. Vese vakasiyana, asi kereke imwe neimwe ichiti ndiyo ine chokwadi. Nekukoshesa kwavo zvakabatwa paaitaura zvakasarudzika, havana hanya zvakanyanya nekutsigira zvavanotenda neMagwaro.
Johane 9:29 Tinoziva kuti Mwari wakataura naMosesi; asi uyu hatizivi kwaakabva.
Vanosiya Jesu vachiti haana kukosha, sezvo vachiti Mosesi ega ndiye aive nesimba.
Asi uku kwese kwaive kumhura Mwari. Hapana muMurairo waMosesi pakataurwa nezvevaFarise nevaSeduse. Zvinzvimbo zvavo zvevaFarise zvakaitwa nevanhu zvaive zvisina kufanira sezvo zvaive zvisina kunyorwa muMagwaro. Zvakafanana, hapana patinoverenga muTestamente Itsva pamusoro papasita ari musoro wekereke. Izwi rekuti pasita rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva. Uyezve harina kunzi musoro wekereke.
Makwai anogarobva panzira dzeBhaibheri.
Dai vakaterera kunaMosesi zvakanaka, vaFarise vangadai vakaziva kuti Mosesi pachake akataura pamusoro pemuprofita mukuru aiuya. Uye Mosesi akataura kuti vaifanira kuzoterera muprofita uyu.
Deuteronomio 18:15 JEHOVA Mwari wako uchakumutsira muporofita, unobva pakati pako, pahama dzako, wakafanana neni; unofanira kumuteerera iye;
Asi vaFarise havana kuterera Mosesi vakaramba kuterera Jesu vakamuramba.
Kuzarurwa kwemeso emunhu enyama yaingova nzira yaJesu yekuratidza kuti hushumiri hwake hwechokwadi hwaive hwekuzarura meso evanhu emweya.
Johane 9:30 Iye munhu akapindura, akati kwavari: Nyambera chinhu ichi chinoshamisa, kuti imi hamuzivi kwaanobva, kunyange zvakadaro wakasvinudza meso angu.
Vatungamiri vezvitendero vaisaziva Jesu Kristu. Jesu anozarura meso enyama zvese neemweya kuti ape muono wakadzama wemweya muShoko raMwari. Vatungamiri vezvitendero vaishandisa miono yavo yakaitwa nevanhu nezvinzvimbo zvavo kupofomadza vanhu kuti vasaone chokwadi cheBhaibheri Shoko raMwari. Sezvazviri nhasi apo mufananidzo wekereke yenguva yekupedzisira unoti vasikana vose vari gumi (vakadzi vakachena vanomiririra maKristu akaponeswa) vakanga vakarara.
Zvakazarurwa Chitsauko 3 chinotaura kuti kereke yeRaodikia (zvinoreva kuti kodzero dzevanhu) ibofu asi haizvizivi.
Zvakazarurwa 3:14 Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodhikia, uti
17 usingazivi, ... uri ... nebofu usina chokufuka.
Izvi zvinoratidza kuti kereke iri pachidanho chekukanganisika kwakazara, asi haisi kuziva chinhu ichi.
MaKristu ese anorumbidza makereke avo apo Bhaibheri rinotora nyaya yemakereke neumwe mutowo unorwadza. Vanoenda kumakereke havazivi kuti Bhaibheri rinoti vakavata uye mapofu.
Ndiyani ari kuita kuti kereke igare yakarara? Vaparidzi vavo nevatungamiri vavo.
Sezvazvaive mumazuva aJesu. Akaonekwa semunhu vatungamiri vezvitendero vakamuramba.
Nhasi Jesu anoonekwa seShoko rakaziviswa vatungamiri vemakereke vanomuramba zvakare. Saka akamira kunze kwemukova wekereke achigogodza.
20 Tarira, ndimire pamukova, ndichigogodza.
Jesu ari kutaura kukereke, kwete kuvatadzi.
Johane 9:31 Tinoziva kuti Mwari haanzwi vatadzi; asi kana munhu achishumira Mwari, achiita kuda kwake, unomunzwa iye.
Munhu akaponeswa akarangaridza vaFarise kuti Mwari haatereri vatadzi. Mwari anoterera vatendi vechokwadi.
Johane 9:32 Kubvira pakutanga hakuna kumbonzwika, kuti mumwe wakasvinudza meso omunhu wakaberekwa riri bofu.
Kuzarura meso ebofu chaive chishamiso chaive chisati chambonzwikwa. Chero Mosesi haana kubvira agona kuzviita.
Johane 9:33 Dai uyu asati ari waMwari, haazaigona kuita chinhu
Kuti aite chishamiso chakadaro, Jesu aifanira kutumwa naMwari.
Johane 9:34 Vakapindura, vakati kwaari: Iwe wakaberekerwa kwazvo muzvivi, zvino iwe wotidzidzisa su? Vakamudzingira kunze.
Tarirai hutera hwavo. Vaitenda kuti vatungamiri vezvitendero havana chavaifanira kudzidza. Kuti vaiziva zvese.
Sekereke yeRaodikia nhasi inoti, “... handishaiwi chiro”. Hakuna anogona kuvadzidzisa chero chinhu.
Vatungamiri vezvitendero vakadzingira munhu aive aponeswa panze. Paaive bofu asingaoni, aidiwa. Zvino aive akuona achizvifungira, aive asisadiwi.
Zvimwechete zvinoitika nhasi. Munhu asingawoni pamweya anoziva Magwaro mashoma kwazvo anogamuchirwa mukerereke. Asi kana Mwari akazarura maziso emumwe munhu kuti atange kunzwisisa zvakavanzika zvaMwari, zvisinganzwisiswi nevatungamiri vemakereke, kereke inobva yafara kwazvo kuvadzingira kunze. Vatungamiri vemakereke havadi chero munhu anobvunza mibvunzo kuvatungamiri yavasingagoni kudaira.
Vakabva vatanga kutaura kuti munhu aive aponeswa uyu “akaberekerwa muzvivi”. Ndicho chikonzero nei akaberekwa ari bofu.
Asi izvi zvakarwisa kubvunza kwavo ivo nekuti vaifungidzira kuti nekumubvunza kwavo vaizowana kuti aive asina kuberekwa ari bofu. Zvino vanozokwanisa kuramba kuti chishamiso chaive chaitika. Apa vaive vakutaura kuti kuberekwa ari bofu hwaive humbowo hwekuti aive mutadzi. Saka kutaura kwavo kunorwisana.
Vatungamiri vezvitendero vanoramba Shoko rechokwadi voguma vakuzvirwisa pachavo.
Vaya vanotaura zvakanyorwa kunaMateo 28:19, vachiudza vanhu kuti vabapatidzwe muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene, voguma vakuramba zvakazotaurwa naPetro kuna Mabasa evapostora 2:38 kuti vanhu vabapatidzwe muzita raJesu Kristu. Zvino havazogoni kuwana Zita raMwari, nekuti havazivi kuti zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene nderekuti kudii. Vanhu vatatu vari muTiriniti (isimo muMagwaro) havagoni kuita zita rimwechete. Mweya Mutsvene hauna zita muMagwaro. Vamwe vanoti zita rake ndiMunyaradzi. Asi ichocho chinzvimbo chinotsanangura zvaanoita. Munyaradzi harisi zita. Saka nyaya yese inobva yaramba ichibva paMagwaro zvakanyanya.
“Mwari Mwanakomana” hazvisi muMagwaro. Zvakare “Mwari Mweya Mutsvene”. “Mwari Baba” zvakanyorwa muTestamente Itsva chete, kwete muTestamente Yekare hazvina kubvira zvanyorwa. Vanotenda kuTiriniti havagoni kuzvitsanangura izvozvo.
Johane 9:35 Jesu akanzwa kuti vamudzingira kunze; akati amuwana, akati kwaari: Iwe unotenda kuMwanakomana waMwari here
Kana munhu akaita hushingi hwekumisidzana nevatungamiri vemakereke akadzingwa mukereke, Jesu anobva amuronda ofamba naye. Pamusoro pazvose, Jesu ari kunze kwekereke.
Munguva yekereke yeRaodikia, pakuguma kwenguva, Jesu akamira kunze kwekereke achigogodza. Saka hamuzowani Jesu mukati mukereke. Shoko raMwari rakaziviswa rakarambwa nemakereke.
Zvino kunobva kwauya chinhu chinosuwisa. Zvinobva pakudzingirwa kunze kwekereke chete kuti musangane naJesu Iye ari kunze kwekereke zvakare.
Johane 9:36 Akapindura, akati: Iye ndianiko Ishe, kuti nditende kwaari?
Nekusangana naJesu akada kudzidza zvakawanda. Humbowo hwekuti munhu asangana naJesu huri pashungu dzake dzekudzidza zvakawanda muBhaibheri.
Johane 9:37 Jesu akati kwaari: Wamuvona, vuye, ndiye unotaura newe.
Vatungamiri vezvitendero havana kukwanisa kuziva Jesu seMwanakomana waMwari. Asi munhu aive adzingirwa kunze kwekereke akaziva Jesu seMwanakomana waMwari.
Johane 9:38 Ipapo akati: Ndinotenda, Ishe. Akamunamata.
Akanamata Jesu, kwete mumwe munhuwo zvake.
Munhu haagoni kutenda Shoko rese rakaziviswa kusvikira adzingwa muzvirongwa zvechitendero. Nei? Nekuti chimiro chechitendero chaicho chakarongwa nekutadza chete.
Testamente Itsva haina kubvira yaita kereke yaive napasita semusoro wayo. Nekuita pasita ari mukereke, musoro wayo, zvinoreva pachena kuti musoro wechokwadi Jesu Kristu, anofanira kubuda kunze kwekereke. Hakuna munhu anokwanisa kuita misoro miviri.
Johane 9:39 Jesu akati: Kutonga ndiko kwandakavuyira panyika ino, kuti vasingavoni, vavone; navanovona vave mapofu.
Uku kutonga kwechokwadi. Vaya vari kunze kwekereke ndivo vasingatendi vanokwanisa kuona. Mwari achazarura maziso avo ovaita kuti vaterere Magwaro sezvo havana anozovadzivisa netsika dzekereke dzisimo muMagwaro.
Zvino vanhu ivavo vanoenda kukereke vari mukereke, vachizviti vanoona, vanongogona kuona chete tsika dzekereke yavo nemifungo yevatungamiri vemakereke avo. Apo chimiro chekereke chinowedzera kuipa, vanhu ava vanorasika zvakanyanya kubva paMagwaro.
Muenzaniso wakanakisa kwaive kusarudzwa kwaDonald Trump semutungamiri wenyika yeAmerica muna 2016. Makereke mazhinji aiti Trump aizokundwa nekuti aive munhu akaipa. Asi akakunda.
Nei? Nekuti vatungamiri venyika vaive vanhu vakanaka havana kubvira vaita zvivindi zvekumira vachipikisa maMosiremu anodarika bhiriyoni vaiti Israeri haigoni kupuhwa Jerusarema yekuMabvazuva. Munhu akaipa, Trump, akamira akapikisa maMosiremu akaita Jerusarema guta guru reIsraeri. Izvi zvakazadzisa chiprofita chakaitwa chekuti maJuda achadzokera mumusha mawo.
Trump, munhu akaipa, akagona kuona kuti zvakaprofitwa zvinoda kuzadziswa. Mapofu anokwanisa kuona chokwadi cheMagwaro pakarepo. Akagona kuona kuti zvaive zvakakosha sei muhurongwa hwaMwari kuti chiprofita chaive chaitwa makore anodarika 2500 chichizadziswa.
Tichienzanisa naTrump, vatungamiri venyika vaive vadarika vaive vanhu vakanaka, asi vaive mapofu akazara pachikamu chekuzadzisa Magwaro. Vaitya Alla nemaMosiremu. Saka havana chavakaitira Mwari.
Saka Mwari akabva ashandisa munhu akaipa ari kunze kwekereke. Izvi zvinomiririra shanduko dzinodakadza kumazuva ekupedzisira. Vanhu vakanaka vanotya kumira nechokwadi cheMagwaro vanobva vaita mapofu. Vanhu vakaipa vane zvivindi zvekuita kuda kwaMwari vanogona kuona nekunzwisisa zviri nani kudarika vanhu vakanaka vari mumakereke.
Johane 9:40 Avo vavaFarise vaiva naye, vakazvinzwa, vakati kwaari: Ko nesu vo tiri mapofu here?
Vatungamiri vezvitendero vakabva vakakavara nekuratidzira. Sezvinongoitwa nevatungamiri vemakereke anhasi. Havagoni kutenda kuti mapofu kana tasvika pachokwadi cheBhaibheri. Vakavaka chitendero chavo kuti vasimudzire vatungamiri vemakereke kuti vatonge vanhu. Mupfungwa dzavo vatungamiri vanonzwa kuti ndivo vakakosha kuvanhu vaMwari.
Johane 9:41 Jesu akati kwavari: dai maiva mapofu, hamuzaiva nezvivi, asi zvino munoti: Tinovona; zvivi zvenyu zvinoramba zviripo.
Kusaona nemeso enyama hakukonzerwe nezvivi. Saka kana vaFarise vaive mapofu panyama vaikwanisa kutaura kuti vaive vasina zvivi. Munhu asingaoni haavhari maziso ake nekuziva kuti asaone chiedza.
Asi munhu anotaura kuti anokwanisa kuona haana chikonzero chekutadza kuona chiedza. Kuramba chiedza kunoreva kuti munhu uyu anenge asarudza kuvhara maziso ake nekuziva.
VaFarise vaida kwazvo chitendero chavo kudarika kuda kwavaiita Jesu Kristu.
Vakasarudza kuramba Magwaro kuitira kuti vagare vari muboka ravo ravaive vasarudza. (nhasi tinoridaidza kuti kereke).
Johane 8:24 Naizvozvo ndakati kwamuri; Muchafira muzvivi zvenyu, nokuti kana musinganditendi, kuti ndini iye, muchafira muzvivi zvenyu.
Bhaibheri ndiro chiedza chedu cheMweya.
Mapisarema 119:105 Shoko renyu ndiwo mwenje wetsoka dzangu, Nechiedza panzira yangu
Nekuramba Shoko raMwari vanenge vadzima chiedza, voenda vari murima hunova hupofu pamweya.
Jakobo 3:1 Hama dzangu, musava vadzidzisi vazhinji, zvamunoziva kuti tichatongwa nokupfuvurisa.
Vanhu vanofanira kungwarira zvakazara pavanozviita madzishe (vakuru vezvikoro, kana vadzidzisi).
Kana vadzidzisi vakatadza kunzwisisa dzidziso, vadzidzisi vanofanira kudavira pakutadza kwavo – zvakare kutadza kwevamwe vanhu vese vavanenge varasisa. Murango wevadzidzisi uchave wakaomarara kana vakaonekwa vakatadza.
Vadzidzisi vese vane hunhu humwechete hwakaipa. Vanozviudza zviri nyore kuti vari kugona. Nhasi kune masangano emakereke anodarika 45 000. Ese akasiyana, asi vese vachiti vane chokwadi. Zviri pachena kuti mune kutadza kwakawandisa kuri kutenderera mumakereke ese iwaya kunotsanangura kusiyana kwawo.
Chii chakakanganisika? Vanhu vanotungamirira. Mutungamiri umwe neumwe kana pasita anoita kuti kereke yake ive mumufananidzo wake.
Vatungamiri vemakereke vachadaira mumwe nemumwe nekuda kwekukanganisa kwake, nekuti vakazvimisikidza sevatungamiri ivo vasingagoni kutsanangura zvinhu zvizhinji zveBhaibheri.
Saka vanoenda kumakereke vanoramba vari mapofu kuMagwaro mazhinji.
Ruka 6:39 Wakavavudza vo mufananidzo, akati: Bofu ringatungamirira rimwe bofu here? Haangawiri mugomba ose ari maviri here?
Gomba riri mberi kwedu ndiro nguva yeKutambudzika kukuru.
Rangarirai kuti Jesu akamira kunze kwekereke yeRaodikia.
Panguva yekupedzisira Mwari achazivisa Shoko rake kunze kwekereke. Tichatungamirirwa nenzira yakasiyana netsika dzekereke yedu.
Mwari pachake achatungamirira munhu mumwe nemumwe.
Pasita anotaura kuti ndiye musoro wekereke haasi munzira yeTestamente Itsva zvachose akangofanana nemuFarise anoti ndiye musoro weSinagoge. Iyi yaive isiri nzira yeTestamente Yekare zvachose.
Kereke ichienda pasi pehutongi hwevanhu vanozviti misoro ndiko kuneta kwayo kukuru. Asi vanhu havazooni izvi zvachose sezvo vachitenda kuti kuchengetedzeka kwavo kuri pakuva nhengo dzekereke.